गर्भवतीको मृत्युपछि लुम्बिनी अञ्चल अस्पताल तनावग्रस्त – www.janabato.com
गर्भवतीको मृत्युपछि लुम्बिनी अञ्चल अस्पताल तनावग्रस्त
२३ माघ २०७४, मंगलवार ०३:५२ February 6, 2018 जनबाटो मिडिया प्रा.लि.
जनबाटो संवाददाता । माघ २३–बुटवलको लुम्बिनी अञ्चल अस्पतालमा प्रसुतिका लागि गएका एक महिलाको मृत्यु भएपछि अस्पताल तनावग्रस्त भएको छ । लुम्बिनी अञ्चल अस्पतालमा भर्ना भएकी बुटवल बस्ने पाल्पाकी ३१ वर्षिया भगवती अधिकारीको आइतबार मृत्यु भएको हो । चिकित्सकको लापरबाहीका कारण गर्भवतीको मृत्यु भएको भन्दै आफन्त विरोधमा उत्रिएका छन् ।
ठूलो संख्यामा आफन्त भेला भएर सोमबार दिनभर अस्पताल परिसर घेरेका थिए । उनीहरुको अवरोधका कारण दिनभर अञ्चल अस्पताल तनावग्रस्त बन्यो । तनाव कम गर्न दिनभर प्रहरी प्रशाशन खटेको थियो । आफन्तले दोषिलाई कारबाही नगर्दासम्म शव नउठाउने चेतावनी दिएका छन् । सोमबार दिनभर अस्पताल र आफन्त छलफलमा बसेपनि निश्कर्ष निस्केको छैन । मृतक पक्षले चिकित्सकलाई कारबाही र क्षतिपुर्ति माग गरेपछि छलफल निश्कर्षमा नपुगेको हो । पति पशुपति अधिकारीले चिकित्सकले गलत औषधी दिएकाले मृत्यु भएको भन्दै घटनाको छानबिन नभए सम्म शव नउठाउने बताए । भने ‘नर्शले औषधी दिनासाथ उनी बेहोस भएकी हुन् । यसैले उनीहरुको गल्ती छ।’
चिकित्सकहरुले भने बच्चादानीको पानी रसाएर रक्तनलीमा मिसिदा मुटु र फोक्सोले काम नगरेकाले मृत्यु भएको दावी गरेका छन् । हरेक एक लाख गर्भवती मध्ये एक जनामा यस्तो समस्या देखिने उनीहरुको तर्क छ । गतवर्ष मात्रै यस्तै समस्याले ८ गर्भवतीको मृत्यु भएको थियो ।
अस्पतालका अनुसार आइतवार ७ बजे डेलिभरीका लागि अस्पताल पुगेकी भगवतीलाई ९ बजे अस्पताल भर्ना गरिएको थियो । उनलाई श्रीधर आचार्य लगायतको विशेषज्ञ टोलीले जाचेको थियो । करिब १० बजे चिकित्सकले चेकजा“च गरेर पाठेघर खुलाउने (अक्सीट्रोसीन) औषधी दिएका थिए । करिब ११ बजे पाठेघर खुम्चाउने (सिन्ट्रोसिन) औषधी दिइएको थियो । यसको करिब १० मिनटमै उनको सरीर शिथिल हुदै र नीलो हुदै गयो । यसपछि चिकित्सक आत्तिएर सलाइन चढाएका थिए । सलाईनले कम गर्नु साटो झन् बढी भएपछि आइसियुको भेन्टिलेटरमा राखीएको थियो । उनको अवस्थामा सुधार नआएपछि मध्यान्ह अस्पतालले मृत घोषणा गरेको थियो । मृतकका ७ वर्षे एक छोरा छन् ।
अस्पतालका मेसु कृष्ण खनालले घटनाको निश्पक्ष छानबिन गरी दोषि ठहरिए अस्पताल आफ्ना कर्मचारीलाई कारबाही गर्न र पीडितलाई क्ष्ँतिपुर्ति दिन तयार रहेको बताए । ‘प्रमाण विना नै चिकित्सकको लापरबाही भन्न मिल्दैन ।’ उनले भने ‘औषधीका कारण मृत्यु भएको भएपनि त्यो औषधीको छानबीन गर्न हामी तयार छौ“।’
← प्रजातन्त्रमा सबैभन्दा खतरनाक संस्था न्यायपालिका हो: अरुन्धती राय
नेविसंघ अध्यक्षको मृत्युपछि पोखरा तनावग्रस्त →
७ मंसिर २०७४, बिहीबार ०९:३४ जनबाटो मिडिया प्रा.लि. Comments Off on राजपा नेपालले घोषणापत्रमै ल्यायो बहुराष्ट्रका विवादास्पद विषय
मुम्बई शहरको अग्लो भवनमा विमान ठोक्कियो, ठूलो क्षति भएको आशंका
१४ असार २०७५, बिहीबार ११:३९ जनबाटो मिडिया प्रा.लि. Comments Off on मुम्बई शहरको अग्लो भवनमा विमान ठोक्कियो, ठूलो क्षति भएको आशंका